Tag: fandaniana doka finday facebook
Ny fidiram-bolan'ny media sosialy dia andrasana hitombo hatrany amin'ny $ 11 miliara dolara amin'ny taona 2017. Ny Facebook fotsiny dia antenaina hahazo $ 1 miliara amin'ny vola miditra amin'ny finday amin'ny taona 2013. . Mora ny milaza izany ho an'ny olona izay nandray an-tanana taloha ka afaka nanangana mpanaraka be dia be. Tsy izany no toe-javatra iainan'ireo orinasa
Inona no tsy mety amin'ny karatry ny orinasanao?
Alarobia, Septambra 9, 2009 Alarobia, Septambra 9, 2009 Douglas Karr
Ny karatra fandraharahana dia fanazaran-tena mahafinaritra ahy foana. Hafa foana ny zavatra nataoko tamin'ny karatry ny orinasako - ny karatra bilaogiko voalohany misy ny sariko, avy eo fonosana PostIt Notes, ary karatra manify miaraka amin'ny dispenser avy any Zazzle. Androany aho nijery teleseminar an'i Alex Mandossian tao anaty andiam-pampianarana orinasa nandefasako anarana ary nanondro fanararaotana lehibe iray izy navelako hisosa… telo